Italia itodiana: toerana 20 ambony amin'ny fo 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Italia itodiana: toerana 20 ambony amin'ny fo 2021
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
FAI dia ny National Trust of Italy izay natsangan'ny Fondo Ambiente Italiano tamin'ny taona 1975 mifototra amin'ny maodelin'ny National Trust of England, Wales, & Northern Ireland. Fikambanana tsy mitady tombontsoa manokana izy io ary manana mpikambana mihoatra ny 190,000 hatramin'ny taona 2018. Ny tanjon'izy ireo dia ny fiarovana ireo singa amin'ny lova ara-batana any Italia izay mety ho very.
Miaraka amin'ny vato 2,353,932, naneho ny fitiavany ny lova ara-kolontsaina sy tontolo iainana ao amin'ny firenena ny Italiana.
Mpandresy ny "Places of the Heart" andiany 2020 miaraka amin'ny vato 75,586 dia ny lalamby Cuneo-Ventimiglia-Nice.
Ireo mpandresy voasokajy telo voalohany dia hotolorana amin'ny fampisehoana tetikasa fanatsarana, loka hatramin'ny 30,000 ka hatramin'ny 50,000 euro.
Ity asa ity, noforonin'i Cavour, ary misy lalamby 96 kilometatra, tonelina 33, ary tetezana 27 ary lalan-kely manakaiky ny tanàna 18, dia noravan'ny Alemanina tamin'ny 1943 ary namboarina tamin'ny taona 1970. Androany dia mitaky drafitra fanarenana lehibe, fikojakojana ary fanatsarana izany, mihevitra ihany koa ny mety ho fizahantany. Ity asa ity, na izany aza, "tamin'ny 2013 dia natahorana ho rava ary indrisy tapaka tamin'ny volana oktobra lasa teo noho ny fihotsahan'ny tany Colle di Tenda vokatry ny tondra-drano izay nitokana an'i Val Roya."
Amin'ny laharana faharoa, miaraka amin'ny vato 62,690 XNUMX, dia ny Castle Sammezzano ao Regello (Florence), maritrano tsy manam-paharoa firavaka any Italia ary eto amin'izao tontolo izao. Ity trano ity dia efa mpandresy tamin'ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2016, saingy indrisy fa ity habaka mampino handresen'ny zava-kanton'ny Moorish ity dia gadra toe-java-bitan'ny birao sarotra izay mbola tsy namela ny lapa sy ireo zaridainany 190 hektara hamiratra indray taorian'ny nandaozana azy.
Amin'ny laharana fahatelo, miaraka amin'ny vato 40,000 XNUMX mahery, dia ny Castle of Brescia, mpiaro ny tanàna Risorgimento izay mila hatsaraina sy karakaraina araka ny angatahin'ireo fikambanana sy orinasa isan-karazany ao amin'io faritra io. Eo amin'ny laharana fahefatra dia ny Via delle Collegiate di Modica (RG), lalana iray izay mampifangaro tsara ny Katedraly San Giorgio sy ireo fiangonana ao San Pietro sy Santa Maria di Betlem.
Ny toerana fahadimy dia ny Hopitaly ary ny Church of Ignazio Gardella, Alessandria, amin'ny fahenina dia ny fiangonana rupestrian of San Nicolò Inferiore, Modica (RG), eo amin'ny laharana fahafito dia ny Bridge Bridge of Gravina ao Puglia izay nahazo ny loka web ihany koa, tao amin'ny ny fahavalo dia ny Church of San Michele Arcangelo di Pegazzano (La Spezia), ary amin'ny laharana fahasivy sy fahafolo dia ny Hermesy of Sant'Onofrio al Morrone, Sulmona (AQ) ary ny Museum of the Mystery of Campobasso.
Amin'ity fanontana ity dia tohanan'ny Intesa San Paolo ary notanterahina teo ambanin'ny fiarovana avo nataon'ny filohan'ny Repoblika ary ny Patronage an'ny minisiteran'ny lova ara-kolontsaina sy ny hetsika ary ny fizahan-tany ary ny fiaraha-miasa amin'ny RAI, dia misy toerana maro hitsidihana any Italia , indraindray tsy dia fantatra loatra amin'ny firoborobon'ny fizahan-tany, izay nangatahan'ny olom-pirenena isam-paritra mba afaka manatsara.
Ireo dia tandindon'ny tantara, ny kolontsaina ary ny hatsaran'i Italia, izay azo vakiana amin'ny antsipiriany momba ny Tranonkala FAI, natokana ho an'ny fandraisana andraikitra ary mila ny fitiavana sy ny fanohanan'ny olom-pirenena nanolo-tena hiady amin'ny fahaterahana indray amin'ireo toerana hadino matetika loatra ireo.
Inona no manaraka?
Ireo mpandresy voasokajy telo voalohany dia homena valisoa (aorian'ny fampisehoana tetikasa fanatsarana) 30,000 ka hatramin'ny 50,000 euro, raha ny FAI kosa no hikarakara ny famoronana fitantarana an-tsary ny toerana nahazo vato betsaka indrindra avy amin'ny tranonkala (ny Gravina tetezana lakandrano, misy ihany koa ny sarimihetsika James Bond «No Time to Die» farany, izay manangona ny loka fa tsy ny lapa Sammezzano, izay tsy afaka manangona loka bebe kokoa). Ireo toerana nahazo vato 2,000 farafahakeliny dia ho afaka handray anjara amin'ny antso fanatsarana, raha ho an'ireo fananana hafa kosa notaterina (ny sasany azo jerena ao amin'ny galeriany ho ampahany amin'ny lisitra feno ao amin'ny tranokalan'ny Tahirim-bolan'ny tontolo iainana) , ny FAI dia hanao izay hahazoana antoka fa ny andrim-panjakana dia mandinika akaiky ireo toerana rehetra izay ao anatin'ny fahatsiarovana iraisana.